Magaalada Rome Hore Ayaan Ugu Sugnaa, Boqolkiiba Siddeetan Waan Tegayaa – Laacib Ka Tirsan Liverpool Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Baxayo Anfield – Latest Sports News
Laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ku dhawaaqay inay u dhow dahay inuu iskaga dhaqaaqo naadigiisa oo uu xirfaddiisa ula wareego meel kale.
Tababare Jurgen Klopp ayaa inta badan xili ciyaareedkan ku adkaystay saf isku mid ah oo aanay fursad ka helin laacibiin u badan da’yar oo doonayey inay usoo dallacaan kooxda sare iyo kuwo kale oo kaydka ku caajisay.
Sida uu qoray wargeyska Corriere dello Sport ee kasoo baxa waddanka Talyaaniga, mid ka mid ah ciyaaryahannada Liverpool ayaa go’aan ka gaadhay mustaqbalkiisa, isla markaana ku biiri doona koox kale oo uu rumaysan yahay inay qayb ka qaadan doonto dhismaha xirfaddiisa ciyaareed.
“Rome hore ayaan ugu sugnaa. Waxaan la hadlay Lazio oo i tustay qorshe cajiib ah. Waan xiisaynayaa hindisahaas. Waxaan la hadlay agaasime Igli Tare oo ku fikiraya inaan noqon doona ciyaartoy wanaagsan, inaan tago Lazio na doorasho wanaagsan ayay u noqon doontaa xirfaddayda.” Sidaas waxa yidhi Bobby Adekanye oo ka mid ah ciyaaryahannada da’da yar ee Liverpool.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa kale oo uu yidhi: “Waan la socdaa dhamaan ciyaaraha Lazio. Horyaalka Serie A, waxaan ku horumarin karaa tayadayda, sababtoo ah waxaan jecelahay inaan weerar ahaado. Immobile ayaa ah ciyaartoy wanaagsan oo haddii aan tago Lazio aanu si fiican u wada shaqayn doono. Wax badan ayaan ka baran karaa Correa, waa ciyaartoy kale oo wanaagsan. Sidee ayaan ugu dhowahay Lazio? Siddeetan boqolkiiba. Wali waa inaan go’aankii ugu dambeeyey la gaadho wakiilkayga iyo qoyskayga, si degdeg ah ayaanad u ogaan doontaan.”